I-Boutique yokubuyela elunxwemeni: i-Bosun Cottage
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAlly - Deal Holiday Lets
Ibekwe emazantsi eengxondorha kunxweme lwaseKingsdown, iBosun Cottage yindawo entle yokuzimela enesitayile esinenzolo engenakuthelekiswa nanto ngokuchasene neyona ndawo imangalisayo yomiselo oluselunxwemeni enembono engaphazamisekiyo yolwandle.
Olu lunxweme lwesiNgesi kunye nelizwe eliphila ngokugqibeleleyo. Kwimizuzu nje emihlanu ngaphandle kwedolophu ephilayo yokuloba yaseDeal, thatha indlela eselunxwemeni isiya kwilali entle yaseKingsdown. Amawa amhlophe amhlophe aphawula ukuzola okungaphambili. Cima kwindlela yengqalutye ekhokelela elwandle, kwaye apho iBosun cottage ihleli phakathi kwezindlu zabalobi kwindawo engasese elunxwemeni.
Ekufikeni kwakho, thatha isihlalo phakathi kwamagqabi efennel ngokuzolileyo ujonge umboniso ophambi kwakho: rose pink dawn; Ukutshona kwelanga okutshisayo kunye nobusuku obukhanyayo bonke ukusuka kumnyango wakho wangaphambili.
Zininzi iihambo ezithatha umoya: thatha indlela yaselunxwemeni yase-Kingsdown ukuwela ukuya e-St Margaret's Bay (jonga ibhasi kaFleming ka-007), ukuya kwi-lighthouse kunye ne-White Cliffs kwindawo yokukhumbula. Kwabo bakhetha ukuhamba phakathi kwelizwe, le ndawo igcwele amaplanga kunye neenduli eziqengqelekayo apho uya kuthatha ipiknikhi ngaphambi kokuba ubuyele kwindlwana yakho ukuze ufumane iglasi ekhazimlayo yeChapel ePhantsi okanye ipayinti yeMalusi Neame. Kungenjalo, thatha indlela yasentshona ukuhambahamba okufutshane kwaye uzifumanele indawo efihlakeleyo phakathi kwezindlu ezintle zaselwandle ngaphandle kwe-Zetland Arms pub eyakhiwe, ngokwenyani, elunxwemeni.
Njengoko usihla elunxwemeni ungena eBosun, woyiswa kwisofa eleleyo eleleyo enezihlalo ezibini kunye nezitulo ezibini ezihambelanayo; Ilinen yengqalutye ethambileyo ilungiswe kakuhle yimigca yasemanzini yokujulwa koboya begusha kunye nemiqamelo yeentsiba etyebileyo. Ngeentsuku ezinemvula isitshisi somthi omuncu silindile ngelixa iwotshi yemozulu yaseBramwell Brown exhonywe ngokungqongqo inika iqondo elamkelekileyo lokuqikelelwa kweentsuku nobusuku obuzayo.
Ucango oluyihafu lwamaDatshi lulungele ukungenisa impepho yolwandle enetyuwa ukuya kwigumbi lokutyela ngobusuku obuzolileyo.
Thatha isidlo sakho sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa kwindawo epholileyo yegumbi lokutyela apho isibane esikwitafile yekhonsoli sibonelela ngokukhanya okuthambileyo ngokuchasene nesiseko sayo samalahle ahlanjiweyo. Kungenjalo, ngeentsuku zasehlotyeni nobusuku, ziphathe kwi-al fresco yokutyela kwi-terrace. Ngokuqinisekileyo kukho into eninzi yeMeditera malunga nokumisela, ngokukodwa ngobusuku obucacileyo inkwenkwezi. Kwaye kumoya wokwenyani we 'mea casa..' kukho nebar yokunyaniseka enokhetho lwewayini ezicolekileyo ukuze uzincede (esikucelayo kukuba usasaze uthando ngokususa into oyiselayo ngokunye kweyakho intando kwaye ke yazisa abanye kwiindawo ezintsha zewayini kunye nemixube!)
Ikhitshi inesitayile kwaye iyasebenza ine hob yerhasi kunye nesitovu, imicrowave kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Kukwakho nendawo yokugcina iitawuli zaselwandle, iibhodi ze-boogie kunye nezinto ezinjalo kwigumbi eliluncedo elikufuphi. Ukusuka ekhitshini unokufikelela kwintendelezo kunye negadi apho i-hammock eqaqambileyo ibonelela ngokuzimeleyo kunye nokuphumla elwandle naselanga.
Ekupheleni kwepaseji yobude bomgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlambela elineendonga ezinobugcisa belitye kunye nebhafu kunye neshawari. Isitya saseTshayina sihlala phezu kwetafile yamaplanga, kwakhona, yonke into ingenamthungo ngokuhambelana nesimbo sokutyikitya sendlu encinci.
Phezulu kukho amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela elincinci.
Ibhedi entle yobukhulu obuyinkosi kwigumbi lokulala elikhulu inika iimbono ezingaphazamisekiyo kulo lonke ulwandle kunye namawa kwelinye icala kwaye, ngaphesheya kwamanzi, iFransi kwelinye.
Kwakhona, kukuthathela ingqalelo kwiinkcukacha kunye nokubamba okuchuliweyo okudala i-ambience engalibalekiyo: ukubamba okuluhlaza okwesibhakabhaka kwindawo yomlilo yepine ehlutshiweyo kuchongwa ngokutyikitya imiqamelo yaselwandle. Umahluko phakathi kweglosi kunye ne-matte textures yezibane zebhedi yeCorinium zinesitayile kwaye ziyamangalisa. I-Ottoman emazantsi ebhedi iboleka into eyongezelelekileyo yobunewunewu ngelixa umbhoxo woboya, othambileyo ongaphantsi kweenyawo, uxhasa ngakumbi imvakalelo eyoyikekayo yokuthomalalisa umva.
Igumbi lokulala lesibini lijonge kwindawo ethe cwaka yegadi engasemva kwaye inobuchule bokuguquguquka kwayo: ibhedi yengqolowa ye-oki emithathu-in-enye ihlalisa isalamane, abantwana ababini okanye isibini njengoko ukhetha umntu omnye, ezimbini ezingatshatanga okanye inkosi enkulu. -ubungakanani belungiselelo.
Indawo yokubaleka egqibeleleyo kwabo bafuna isitayile, ukusebenza kunye nentuthuzelo phakathi kwezona zicwangciso zimangalisayo.
Ezinye izinto eziluncedo ziquka:
-Roberts DAB unomathotholo
-Ifenitshala yegadi (izitulo ze-teak ezi-4 kunye neekhushini zemozulu, itafile yetiak, i-hammock)
-Ukufikelela ngokuthe ngqo elunxwemeni (zero imizuzu ukuya elunxwemeni!)
Umbuki zindwendwe ngu- Ally - Deal Holiday Lets
In 2007 my family and I decided to move out of London to the coast for a healthier lifestyle and to bring up our son. We absolutely love Deal which is a truly special place with its eclectic mix of artists, poets and writers. Our style of hosting is relaxed and friendly and we are always at the end of the phone should you need anything at all. I'm truly passionate about our special town and all that it has to offer. I've been hosting since 2016 and in 2019 decided to host on behalf of other holiday cottage owners as well. I absolutely love hosting and will do all that I can to make your stay as welcoming as possible.
UAlly - Deal Holiday Lets yi-Superhost
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R1809
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Deal